miss you love nepali shayari
00mynepalistatus Wednesday,6April 2022
miss you love nepali shayari for your love. you will miss you love nepali shayari withatext or images
If you like to to express or miss you love Nepali shayari in Nepali this is the right place, how much you are missing your someone special persion .You will need miss you love Nepali shayari. You don't need to go any where, you are in the right place!
Here our miss you love nepali shayari collection, there are varieties of poetry for different states of the heart like sad missing you shayari with image and text, miss you shayari for your girlfriend or boyfriends
केही नभन्नुस एस्तो बिन्ती छ,
जति सम्झन्छु जति पटक भेटिन्छ ।
तिम्रो हरेक पक्ष मेरो मुटुमा बसोस्,
तिमिलाई यति धेरै देख्छु कि तिम्रो याद आयो।
हामीले चाहेर पनि तिमिलाई भुल्न सक्दैनौं,
तिम्रा यादहरुबाट हात चोर्न सकिन,
तिमि बिना एक पल पनि जिउन सकिदैन,
तिमी यति धेरै चाहन्छौ कि म भन्न सक्दिन।
यहाँ तिम्रो मायाको कुरा छैन?
धेरै बेरसम्म तिम्रो याद आएन ।
तिमि पनि तिम्रा यादहरु जस्तै बन्न चाहन्छु
न समय हेर न बहाना मात्र आउँछ।
बिग्रिएको सम्बन्धमा वफादारीको खजाना भेट्टाउनेछौ,
तिमीले मेरो मायालाई म पछि सम्झने छौ।
तिमि मेरो दिलमा छौ अनि कसरि खास होला
तिमि बाहेक कसैको यादमा बित्ने
हिचकी भन्छौ तिम्रो याद आयो,
तर तिमी बोल्दैनौ भने म कसरी बुझ्छु ?
कतिपय मान्छे बिर्सिए पनि भुल्न सक्दैनन्,
यो यति धेरै छ कि यो प्रयास नगरिएको छ,
मुटुमा यसरी सम्मिलित हुनु,
उनीहरुको मनबाट मन पनि मेटिएको छैन ।
तिमीलाई सिजनको पहिलो बर्षा मन पर्नेछ,
हामी दिनहुँ कसैको यादमा भिजेर बस्छौं।
जहिले पनि तिम्रा यादहरु वरिपरि भेट्छु,
म आफूलाई धेरै दुःखी महसुस गर्छु
जिन्दगी भरको खुसी पायौ,
मनमा अझै उस्तै तिर्खा पाउँछु ।
दृश्य पनि निर्दोष थियो र खाना पनि रंगहीन थियो ।
तिम्रो याद आयो र मौसम रमाइलो भयो।
वर्णमाला चोर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन,
तपाईंको बेहिसाब विचारहरूले जंगली शब्दहरू दिए।
आज मुटुले तिम्रो उपस्थितिको चाहना गरेको छ,
समय मिल्यो भने सपनामा आउ ।
धेरै समय पछी तिमि मेरो बिचारमा बितायौ,
मेरो खुशीले तिमीलाई पनि असर गर्यो।
तिमीले लिएका सबै भाकल तोडेर,
कहिलेकाहीँ सम्झिदा के हानि ?
प्रशंसा सबैको हुन्छ जब यो हराउछ,
याद नहुने कुरा पनि याद गर्नेछौ।
यदि यो एक दिनको कुरा हो भने, हामी यसलाई बिर्सन्छौं,
यदि तपाई नाजिल हुनुहुन्छ भने
के गर्ने यदि तपाईले आफ्नो मुटुलाई दैनिक धड्कन दिनुभयो भने।
Best Nepali Shayari | Status, attitude, Quotes and Wishes: miss you love nepali shayari